အင်ဂျင်နီယာစက်ယန္တရားနွေဦး - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Qingyun စက်
compression Springs - cylindrical ဟော့ Roll compression အကြီးစား Springs
အကြီးစားနွေဦး - ပူပြင်းတဲ့ကွိုင်နွေဦးမိုးသည်းထန်စွာနွေဦး
မျှော်စင်နွေဦး conical နွေဦး
compression Springs - cylindrical ဟော့ Roll Com ...
ချုံ့, တင်းမာမှုနှင့် torsion: 1. အလုပ်မှာဝန်၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, helical စမ်းသုံးမျိုးသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ Cylinder ပုံစံ helical နွေဦးနှင့် variable ကိုအချင်း helical နွေဦး: 2. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, နှစ်ယောက်အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ 3. က၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, က conical, စာစောင်ကို, ခွက်နှင့်ခုံးပုံစံမျိုးစုံသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ 4. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်လိမ်နွေဦးကိုလည်းနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်: ကြီးမားသော spi ...
ချုံ့, တင်းမာမှုနှင့် torsion: 1. အလုပ်မှာဝန်၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, helical စမ်းသုံးမျိုးသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
Cylinder ပုံစံ helical နွေဦးနှင့် variable ကိုအချင်း helical နွေဦး: 2. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, နှစ်ယောက်အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
3. က၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, က conical, စာစောင်ကို, ခွက်နှင့်ခုံးပုံစံမျိုးစုံသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဖွဲ့စည်းနည်းလမ်းနှင့်ပစ္စည်းများ၏အချင်းသည်နှင့်အညီကြီးမားတဲ့လိမ်နွေဦးနှင့်အသေးစားလိမ်နွေဦး: 4. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်လိမ်နွေဦးကိုလည်းနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ယခင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပူပြင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းသည်, အဆုံးစွန်သောဖွဲ့စည်းအအေးဖြစ်ပါတယ်။
သာမန် cylindrical helical နွေဦး;
variable အချင်း helical နွေဦး။
အဆိုပါ variable ကိုအချင်း helical စမ်း conical helical စမ်း, လိမ်ကွိုင်စမ်းနှင့်ခွက် helical စမ်းရေပေါက်ထဲသို့ခွဲခြားထားတယ်။
cylindrical helical စမ်း, ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အသုံးများရိုးရှင်းသောဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏ဝိသေသလိုင်းဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းသည်ကနွေဦးနှင့် torsion နွေဦးန့ချုံ့နွေဦးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဝန်ကြီးမားသည်နှင့် radial အရွယ်အစားကန့်သတ်ဖြစ်တဲ့အခါ, နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအချင်းချုံ့စမ်းတစ်ဦးပေါင်းစပ်နွေဦးဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွသုံးနိုင်တယ်။
ယခင်: compression Springs - cylindrical ဟော့ Roll compression အကြီးစား Springs
နောက်တစ်ခု: Small cable chain, miniature guide chain, light engineering towline, mini cable protection chain
ဝါး Fiber ပြား
ဝါး Fiber ဟင်းပွဲများ
ကြွေအမှုဆောင် Tray ထဲမှာ
စျေးပေါမင်္ဂလာဆောင် Glass ကိုအားသွင်းကိရိယာဟင်းပွဲများ
ကျောက်မီးသွေးမိုင်း Machinery နွေ
ပေါ်ကို Idler ခါးပတ်ပေါ်ကိုခါးပတ်
custom Compression ကိုနွေဦး
cylindrical coil နွေ
cylindrical Helical Compression ကိုနွေဦး
Eco Friendly မိုက်ခရိုဝေ့ဇီဝပြား
အက္ခရာ တင်. ညစာစားပွဲပြား
ရွှေ Cycle အပြာရောင်အားသွင်းကိရိယာပြား
ရွှေ Cycle Chain အားသွင်းကိရိယာပြား
ရွှေ Cycle အဖြူရောင်အားသွင်းကိရိယာပြား
hot coil နွေ
အိမ်သူအိမ်သားစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအမှုဆောင် Tray ထဲမှာ
စက်မှုအရည်ကျိုမီးဖိုကြွေ Tray ထဲမှာ
စကျင်ကျောက်အမှုဆောင် Tray ထဲမှာ
သတ္တုဆေး Box ကို
နယူးထုတ်လုပ်မည် Chain အားသွင်းကိရိယာပြား
pill Box ကို Key ကို
အသေးစားဆေး Box ကို
ကြံအမှုဆောင် Tray ထဲမှာ
စားသောက်ဆိုင်သည်အဖြူရောင်ကြွေ Tray ထဲမှာ
Z ကိုအမျိုးအစား Bucket ဓါတ်လှေကား
အကာအကွယ်အဖုံး, ဇစ်အမျိုးအစား dustproof အပ်ချုပ် ...
ဆလင်ဒါဝက်အူ, ဆလင်ဒါက c များအတွက်အကာအကွယ်အဖုံး ...